ANTOKO ZANAK’I DADA : Nijoro ara-dalàna – MyDago.com aime Madagascar
ANTOKO ZANAK’I DADA : Nijoro ara-dalàna
Nampafantarana androany tolakandro teny Bel’Air ny fijoroan’ny Antoko Zanak’i Dada.Tonga nanatrika izany teny an-toerana ny praiminisitra lefitra misahana ny toe-karena sy ny taozavam-baventy Botozaza Pierrot, ny minisitry ny toe-karena Ramalason Olga, ny minisitry ny fambolena Ravatomanga Roland, ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ary ireo Ct sy Cst sasantsasany, ireo ratsamangaikan’ny Antoko Zanak’i Dada any amin’ny faritra. Nambaran’ny filoha mpitarika ity Antoko Zanak’i Dada ity Andriamatoa Rakotoarivony Jean Pierre fa efa nitsangana, ary efa niasa , naka toerana ny toerany teo aloha ny Antoko Zanak’i Dada. Efa miparitaka any amin’ny faritra 22 manerana ny Nosy ny birao , ny disitrika 19, ny kaominina 1554, tsy latsaky ny 50% any amin’ny fokontany. Ara-dalàna ny Antoko Zanak’i Dada hoy Jean Pierre satria efa nahazo ny fahazoan-dalàna , ny arrêté laharana faha 9735/2013 tamin’ny 02 May 2013.Tafiditra ao anatin’ity Antoko ity hoy izy ireo mpikambana tao amin’ny Antoko Tiako i Madagasikara teo aloha. Ny TIM araka ny fanazavany dia mihantona araka ny didy navoakan’ny filankevi-panjakana , ka tsy misy mahazo mampiasa ny anarana, na ireo olona nitondra grady tao aza. Raha mbola mampiasa io Antoko TIM io hoy Jean Pierre dia mpisoloky, mpandika lalàna. Noho izany dia miantso ny Zanak’i Dada hiverina ao an-trano.Mpikambana feno ao anatin’ny movansy Ravalomanana hoy izy ny Antoko Zanak’i Dada, tahaka ireo fikambanana hafa ao anatiny. Nambaran’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy fa ilay dada resahina eto dia ny filoha Ravalomanana Marc, izyno tompon’anoka feno amin’ny fananganana ny Antoko. Izy ihany koa no filoham-boninahitra. Marihina fa ahitana olona 13 ny mandrafitra ny birao politikam-pirenenan’ny Antoko Zanak’i Dada izay ahitana ny filohan’ny Andriamatoa Rakotoarivony Jean Pierre, ny filoha lefitra anankiroa, Randrianarisoa Guy Rivo, Stelanony Aina, ny sekretera jeneraly Randriantsehenoarimanana Jules Aimé, Rakotomavo Lalaina, ny mpitam-bola Rasolofonandrasana Alphonse, ny mpanamarim-bola Raharison Mirana, ny mpanolontsaina Razafindrabesa Andrianaivo, Rakotondrabe Marie Clémentine, Raharinavalona Mamy Mamonjy, Randriamarosata Julien, Ramboarivelo Naina, Rakotomalala Miharisoa.
Miandry an’i Dada ny antoko TIM
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 juillet 2013 10 juillet 2013 Catégories Politique
15 réflexions sur « ANTOKO ZANAK’I DADA : Nijoro ara-dalàna »
LA QUESTION QUI SE POSE DEVANT CETTE AVANCEE importante DE LA TROUPE HANITRA ET DE MAMY,QUAND VOUS PENSEZ ARRETER CETTE CRISE ET DE QUELLE FAçON ?
Inona indray no kotroan’ity paik’ady vao2 ity???dia ho an’iza ilay TIM?????
Tandremo sao mivarotra saka be loha indray eeeeeeeeeeee
Mazava fa mbola miantsona ny TIM fa……….. mandrap’ OVIANA dia ho an’iza @’izay????
sa hamidy @’iza????
Mamy Rakotoarivelo : un message à Ramtane Lamamra
« Je m’excuse Mr Lamamra, mais c’est de la médiation qu’on fait dans ce pays et non un dictat. En ce qui est du respect de la loi, les Malgaches ne sont pas les seuls concernés. La Communauté internationale aussi doit respecter les lois malgaches et internationales », a lancé Mamy Rakotoarivelo de la mouvance Ravalomanana.
La Seule Façon de régler cette crise ce sont des Elections Libres sous le Controle de La Communauté Internationale et le plus rapidement possible
Le Seul Obstacle …C’est la France qui ne veut pas entendre parler de Liberté et ne cesse d’interférer dans le Processus Electoral pour le corrompre à l’ avantage de ses Multi nationales
et fait pression sur la Communauté Internationale pour truquer les regles du Jeu
Le Gouvernement Hollande serait plus avisé de s’occuper des affaires de La France qui va très mal et de laisser Madasgascar en Paix …
Raison toute claire et simple :
» SADC – COI – et l’U A – O I F » le paquet d’EMMERDEURS dans le paque de la Francafrique, dirigé par GOLBLATT :
Ahoana ary no ahavitantsika ny handroaka ireo « paquet d’emmerdeurs » kay e?
Tsy vitany resa be sy vavaka intsony mihintsy anie ny mitranga @ firenena e!
Tsy nisy nanao « ecole de stratégie militaire na politique » isika rehetra be « commentaires » vilana eto @ serasera, fa sao kosa mba misy ihany paika afa any ho any azo heverina e?
TIM…tsy TIM….Zanak’i Dada…Zanak’i Neny….zafikelin’iza indray koa????Mahonena e!
Efa tsy alehany ihany ireto « donga & C° », nahazo titre CT,CST sa inona koa mba hiara hiasa @ domelina…ka tsy aleo mikaroka paika afa sa?
Balita! ity angamba ny valin’ny fanontanianao:
> ah ah ah, tsy ho tafita mihitsy ny tolona raha
> izao no fihetsikareo, lazao aloha inona no tapaka
> ? hidina andalambe sa hanabe laharana ireto mpahay
> pôlitika avo lenta efa mameno tanàna, mangovitra
> ve radomelina raha mahitanareo?
Matoa ianao mametraka io fanontaniana io dia angambany misy tsy azonao ny hafatra sy fampianarana navela tao izay nafonja tokoa tamiko.Ataoka amin’ny teny malagasy mba tsy ho azon’ny vahiny.
a./ Ireo rahalahy sy anabavy afrikanina izay namerimberina fa afrikanina isika malagasy ary nampahatsiahy ny fahasahian’i Ranavalona I nanohitra ny herin’ny imperialista tamin’ny androny sy ny fikomiana nataon’ny malagasy tamin’ny raharaha 1947 izay fantatry ny afrikanina mpanatantara rehetra dia te-anambara ry zareo fa tokony ho sahy isika hidina eny an-dalambe ka tsy voatery hifadona foana amin’ny miaramila satria fantany koa fa misy fombantsika hita any amin’ny pasifika.Izany hoe:mila mitroatra sady mila sahy isika ohatran’ireo razamben-tsika.
b./ ny faharoa izay azo ampiharina dieny izao koa dia ny fanohizantsika ny tolona tsy miandry ny firenena mikambana.Ary efa herinandro vitsivitsy no nahazahoako an’io resaka io.Tohizantsika foana ny tolona ary nisy nilaza aza tao fa i Lalao Ravalomanana dia tsy hiala mihintsy fa aleo karakarain’ny firenena mikambana ny fankatoavana izay tsy maintsy hisy ny vokatry ny fifidianana.Ny dikan’izany tolona ary tsy mimenomenona intsony any amin’ny firenana mikambana.
Vokatr’izany dia :
1./ fidinana an-dalambe izay tsy voatery hifadona amin’ny tafika.
2./ Roso hatrany ny dia miaraka amin’i Lalao Ravalomanana tsy misy firenena mikambana.Anjarantsika ny mitady vola hanaovana an’io fifidianana io ary hamporisihana ny CENIT handrindra ny fotoana rehetra mba ho tomombana tsara ny fandaharampotoana sy ny fanantontana ny takelam-pifidianana.
3./ Mila mifandinika matetika isika mpanohana ny ara-dalàna mba hisian’ny feedback.
Misaotra ny rahalahy afrikanina sy ny anabavy isany
11 juillet 2013 à 22 h 04 min
Ny firenena mikambana dia manohana hatrany ireo firenen-dehibe matanjaka izay namorina io sehatra io mba hanohizan-dry zareo, ankolaka sy fomba afa ny fotokevitra fahiny hanapatra fahefana @ madinika samihafa ka hitohizany halatra ambany tany na anaty ranomasina sy afa.
Dia ahoana ny hinona fa ny CENIT dia tsy mbola « infiltré » na mazava kokoa hoe ny frantsay nahazo tso-drano avy @ CI sy firenena mikambana no nampitsangana io?
Efa oviana no nampametraka ny « logiciels » momba fifidianana ny vozongo ary nihevitra hampamoaka ny ttsy samihafa momba ny fifidianana.
Ny hazo-hevitry ny mpanjanaka efa mandravina be fa ny any zanahiny mbola tsy mitsimoka akory aza angamba.
Dia hanaiky fotsiny ve ry domelina sy ny tariny hijery ny mpitolona hidina an-dalambe?
Afa ny tontolo nihiainany zoky olona teo aloha ka toa nofy sisa ny nisiany tanjan-tsainy izy ireo nasahy nanohitra anefa tsy nanana « phone portable » na ordi akory fa kosa tena fitiavana tanindrzana.
Ry zareo any @ pasifika, dia manana ilay fomba somary milasilasy izay indrindra raha tafiditry ny karana ilay ravin-dozatra antsoiny gasy hoe Katy(izay ahely ao M/scar koa ankehitriny araky « circuit » voarindra hanimba ny gasy ary hampanakareana ny tia vola na hasy na vahiny)
Ankehitriny ny « naiveté » sy resabe @ serasera no taritina toy ny kitoza mozatra efa 4 taona izao.
Mety tia hanaitra ny gasy mihesona loatra ny afrikana mampatsiahy ny fahiny tao @ ilay nantsoina hoe M/scar « l’île rouge » indrindra fa misimiy ihany ny malagasy tsy mirona @ tantaram-pireneny…dia izao ny vokany e!
Izao azo antsoina ho « l’île orange » sisa satria « Orange » sy ny karana no ampiasainy frantsay handombo sy hanjanaka indray ny malagasy.
Tsarà daholo phatongany Revy e!
Raha ohatra nisy ny vanim-potoana nahafahan’i Marc Ravalomanana nitondra izay notohanan’ny firenena miteny anglisy dia tsy hitako izay antony tsy azo amerenana izany.
Tsy mino mihintsy aho hoe mifanaraka ny firenena tandrefana satria iny 2001-2002 dia ohatra iray.Ary misy firenena atao hoe lehibe tsy nanjanaka ary tsy ao anatin’ny firenena manana veto toy Alemàna sy Italia.Ary misy koa zanatany anglisy manankarena toy an’i Singapour,Hong-kong,Brunei,Seychelles,Maurice,Malaisie,Taiwan ary ireo tany sasany any amin’ny golfe.Ka tsy atao iray lasaka mihintsy ny tandrefana rehetra.
Marina ny anao raha momban’i Fidji izay nahitana tsy fifanarahana teo amin’ireo karana sy ny melanesiana.Fa any Samoa izao dia efa tsy misy an’izany.
Mety efa misy hevitra mandeha anie any ataon’ny tia tanindrazana fa tsy ambaraina eto daholo angamba.Ny mpitsikilo eto misy.
Fa rahoviana ihany isika malagasy vao ho tonga saina fa tsy ny vahiny (pays étrangers) mihintsy no tompon’andraikitra amin’izao fahavoazana izao ê ?
Isika malagasy no tena vendrana sy tsy mamokatra ! Tompony mangatak’atiny lava izao. Faly ery tsipazana tsinay sy voan-kena, fa ny nofony lasan’ny vahiny sy mpandroba rehetra !
Afenina lava ao ambadikin’ny fitiavan-tanindrazana fôpla, ny tsy fahombiazana, ny hakanosàna sy havendrànana !
Lanitra maintin’ny rahona, mbola lazaina fa manga ! Efa hita izao fa tsy ho ela dia hivatravatra ny oram-baratra, dia mbola iny ihany lasa MANÀHY VARY !
Ity herinandro ity aho no efa namerina indray hoe « diso koa isika malagasy anie e! »
Lalàm-piainana ny malemy mora hararotiny matanjaka, na ho any olona na ho any biby izany…na ny voary aza, ohatra ny « figuier constrictor » ve moa ilay filaza azy.
Antsika malagasy re ny miaiky ny hadisoana sy mijery aingana hoe ahoana ny fomba hialana @ fomba ratsy ka hijoroana sy asahina hanokatra fijery sy fisainana vaovao e!
Nisy tokony nalaina tahaka anie, dia ny filoha M.Ravalomanana fa izany hoe ny vahoaka mbola dombon’ny « francophonie » dia nisaina « francophone » be loatra mandrankehitriny…dia vao maika mahazo vahana ny frantsay.
» Vazaha mody miady » ve moa ilay fiteny ?Tsy hiteny aminy firenena malemy mihintsy akory ny matanjaka hoe izao no ho ataonay anareo.Tsy hitonona mivantana ny rainiboto hoe tsy mila any « l’île orange » mba hanohizany ohatra ny fikarohana miadana zavatra afa efa natombony ka tsy tiany ho fantatry ny frantsay. Dia hatrany hatrany e!
American Samoa ve moa ilay fiantso fanavahana hoe « iza no aiza » .
Raha misy zanatany taloha ka manakarena dia satria nahay nivoatra ry zareo fa tsy mihesona anaty vavaka sy hakanosana ary ny « francophones » matetika no sahirana an.
Ka rehefa manana tanjona dia hita izay paika ho raisina ahatanteraka izay novinavinana.
Lasaka iray no mety hasina ny tandrefana fa samy manana ny fomba fiasany ka ohatra mazava,hita izao ny elanelany rainiboto sy frantsay .
Lasaka iray no mety hametrahana ny madinika voajanaka fa samy manana ny fomba fitraotrany na ho « moramora » na « slow attitude » » na « vatravatra » na ….
Resaka fototra ilaina hazava dia fasahina hitraka sy hampiseho ny Hasina sy haja maha malagasy, izay no tena ilaina aingana mba hitaritana ny vahoaka mora foana
Efa be izay resa be, 4 taona izay ka dia…ho tonga anie ny Revy sa « printemps malagasy » sa inona koa fa mankaleo be ny orange.
Tsy lasaka iray no azo asiana ny tandrefana satria nisy tsy nanjanaka(scandinavie,suisse,autriche,…) ary ny Alemàna nanohana an’iRavalomanana foana izay niofana tany sy tany Danemark ary ireo mahalala tsara fa tsy azoazon’ny vozongo izany.
Ny madinika koa dia tsy azo atao amin’ny lasaka iray satria misy ireo miezaka miala amin’ny fanjanahana sahala amin’i Angola,Cameroun …ary misy ny manaiky ny fanjanahana sahala amin’i Gabon,Djibouti.Dia ao koa ireo zanantany anglisy nahay nanavotra tena sy ny tsy nahay nanavotra ny tenany fa niverina amin’ny fombany dia tsy betsaka ny vehivavy mianatra noho ny fomba (Tanzanie,soudan).Tsy mitovy daholo mihintsy.
Tsy american Samoa fa samoa occidental(resaka ara-jeografika io fa tsy politika).Ary ry Singapour na Taiwan(be katolika) na Brunei(silamo) dia tsy nanary ny fivavahana matanjaka any aminy .I Kelimalazantsika dia tsy hahavita n’inona n’inona ho antsika raha hiverina amin’izany isika.
Fa kosa ireo mpanao biriky ao amintsika sady francohone no francophile no tokony esorina tsy hanao politika intsony fa manambotry ny firenena.Tsy ny fivavahana no nitondra izao fahoriana izao tao amintsika fa ireto mpanao biriky ireto no fitaovana ampiasain’ny mpanjanaka hanambotry ny firenena.Manana fomba hafahafa koa ireo.
Ka mpanao biriky ny françafrique no heverina ahilika irery va?
Ireo akory tsy voafongotra @ resaka fotsiny …raha tsy hoe matanjaka ny fatotra @ mpanao biriky miteny « zanglisy ».
Anefa ra-malagasy efa ho « génétiquement francophile » sa ahoana re ny hilazana izany…ka dia hiandry mpanao biriky avy @ planeta Mars vao hiova Gasikara.
Ny fomba fiasa no samihafa re dia miatraika hatrany @ firenena nojanahana izany e.
Ary dia izao hita izao…..fampiandiana resaka tsy hitondra vaha olana hanavotra ny firenena efa tsy fantatry ny maro ankoatry ny anarany film hoe « M/scar ».
Aleo haka rivotra any @ tany manaja tsotra fotsiny ny olona sy ny natiora, tsy lany fotoana @ vavaky ny misionera nampiditra fandomboina sy fandravana…
Faranana hatreo na « fin de non recevoir » hoy ry fotsy frantsay
Avelao hanjakàn’izay te-hanjàka, rehefa tia tena, vendrana, pourris, ary kamo be tenda daholo ny malagasy ê !
Raha mbola fimenomenonana tsy mahavita na inona na inona ! Mikolay sy mitomany hoe mahantra ary fadiranovana, fa mijery an’ireto mpanao ampihi-mamba fotsiny no atao !
Andriamanitra mba nanome, fa i balita (tsy ianao io ambony io akory) no tsy ambinina ! MDR !!
miaramila menatra dit :
SOSOKEVITRA amin’ny PROPRAGANDY:
1- Amin’izao 2è tour zao ny andaniny mivoy mafy ny hoe » tsy hamerina ny fitondrana jadona » ny fifidianana ny N°3
ISIKA zay manohana ny n°33 kosa tokony tsy hatahotra ny hiteny hoe » tsy hitohizan’ny fandrobana firenena sy ny hala-bola ary ny tsy ara -dalàna rehetra » no ifidianatsika an’ i JLR – Izany no mety misy mihaino kokoa noho ny programa. Tsy hoe akory tsy hanazava ny programa fa aza variana loatra amin’izany satria ny ady hatrehana hatramin’ny 1er tour dia ady amin’ny mpanongam-panjakana sy ny mpandroba firenena.
2- Mba ataovy zay hi-recupérer-na ireo mpandàla ny ara-dalàna rehetra mipetrapetraka zay maro any hoa any indrindra ireo déçu amin’izao tetezamita sarintsariny izao ( victime foana ny mouvance Ravalo satria toa figurant fotsiny ihany dia ireo foza hatrany no manao ny lalàna sy ny danin’ny kibony) fa aza dia focalisé fotsiny amin’ny fampodiana an’ I DADA. i Dada mantsy efa tsy maintsy mody raha vao mandresy isika fa ny tetika handresena no zava-dehibe. Tsara ilay tetika amin’ny ady amin’ny ala-bato fa tokony hilàna hevitra koa ny fivilan’ny taratasy eny an-dàlana sy ny au niveau CES mihitsy no tena atahorana.
Misaotra antsika mihaino sy mandray.
Précédent Article précédent : Tsy maintsy miverina eto ny filoha Ravalomanana fa izay no lakilen’ny krizy
Suivant Article suivant : Imerintsiatosika : nijery ifotony ny olan’ny tantsaha i Neny